डा केसीका हरेक आन्दोलनमा किन पुग्छन् हनुमानजी ?
असोज २०, २०७४ शुक्रवार १७:०४:०० प्रकाशित
गोरो वर्ण, छुस्स दाह्रीजुँगा र घुम्रिएको कपाल । यो हुलिया भएको एउटा मानिस काठमाडौंमा हुने प्रायः सामाजिक आन्दोलन र कार्यक्रममा भेटिन्छ । चिन्नेले ‘हनुमानजी’ भनेर सम्बोधन गर्छन् ।
फिल्म ‘पशुपति प्रसाद’को हनुमानजीले दर्शकको दिल–दिमागमा कब्जा गर्‍यो । यही हनुमानजीको मुकुटभित्रका मान्छे हुन्, फिल्मकर्मी रविन्द्रसिंह बानियाँ।
फिल्म ‘पशुपति प्रसाद’को हनुमानजी चरित्र केही समयअघि भाइरल नै भयो । चरित्रका हिसाबले धेरैका मनमा बसेका ‘हनुमानजी’लाई मुकुट उतारेपछि चिन्ने कमै हुन्छन् । त्यसैको लाभ छ उनलाई, चुपचाप आन्दोलनमा सरिक हुन्छन् । चिनेजानेका केहीसँग बोल्छन् र आफ्नो बाटो लाग्छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीका पक्षमा निस्किने हरेक जुलुसमा उनी पुग्छन् । यही क्रममा केही दिनअघि त पक्राउ समेत परे।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर पास गर्न लागिएको सुइँको पाएपछि असोज ९ गते डा केसीले एक्कासी अनसन बस्ने निर्णय गरे । दशैंको छेकमा डा केसी अनसन बस्ने निर्णयमा पुगेपछि उनका समर्थक पनि तात्तिए र घेर्न पुगे संसद् भवन।
बढीमा डा केसीका जम्मा २० जना समर्थक सहभागी हुँदा त्यसमा हनुमानजी छुटेनन् । डा केसीका पक्षममा संसद भवनअघि निर्धक्क नारा लगाए । नारा–जुलुस निषेधित क्षेत्रमा उनीहरु आन्दोलन गर्न पुगेपछि प्रहरीले के छाड्थ्यो ? भ्यानमा कोचेर पुर्‍यायो, तीनकुने प्रहरी चौकी । पक्राउ पर्नेमा उनी पनि थिए।
बिहीबार डा केसीले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनसन घोषणा गर्दै गर्दा कि पत्रकार पुगे कि त्यहीँ कार्यरत डाक्टर । त्यसबाहेक डा केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्ने दुई–चार जनामा रविन्द्रसिंह पनि भेटिए।
उनलाई सोधियो– यस्ता खालका विरोधका कार्यक्रममा किन पुग्नुहुन्छ हनुमानजी?
उनले सीधा उत्तर दिए, ‘कि त आफैं लड्न सक्नुपर्‍यो । आफूले सकिँदैन भने राम्रोका लागि लडिरहेको व्यक्तिलाई समर्थन गर्नुपर्‍यो।’
उनलाई डा केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा उठाइरहेका एजेन्डा मन परेका छन् । सुरुमा उनलाई चिकित्सा क्षेत्रका बारेमा त्यति धेरै थाहा थिएन । तर, नेपालका हरेक क्षेत्रलाई बेथितिको ऐंजेरुले जेलेको छ जस्तो लाग्थ्यो उनलाई । त्यसैले यसका लागि आफ्ना तर्फबाट लाग्नुपर्छ भन्ने पनि उनको मनमा थियो र यस्ता खालका कार्यक्रममा सरिक हुन्थे।
उनले भने, ‘कि आफू त्यो विषयमा निपुण हुनुपर्‍यो, कि त्यही क्षेत्रका अभियन्ताका कुरा पत्याउनुपर्‍यो । सुरुमा मैले डा केसीका कुरा पत्याएँ र आन्दोलनमा सहभागी भएँ । अहिले धेरथोर बुझेको छु।’
गलत भइरहेको छ जस्तो लाग्यो भने मूकदर्शक भएर बस्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ उनलाई । त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सकेको गर्न तम्सिरहेका हुन्छन्।
‘मैले आफ्ना तर्फबाट केही गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर गरिएन भनेर पछुताउनु नपरोस्’, उनी भन्छन्।
फिल्म निर्माण र अभिनयमा सक्रिय उनी फुर्सद पायो कि सामाजिक कार्यमा पनि सरिक हुन रुचाउँछन् । उनी बागमती सफाइदेखि सहयोग कार्यक्रमसम्ममा आफूलाई अघि सारिरहेका हुन्छन् । भूकम्प जाँदा राहत वितरणका लागि सक्रिय भए । टोपी दिवसमा केही रकम सहयोग जुटाई टोपी किनेर चेपाङ बस्तीमा बाँडे।
फरक काममा रुचि राख्ने उनी फिल्ममा पनि फरक स्वाद पस्किरहेका छन् । केही समयअघि मात्रै उनले निर्माण र अभिनय गरेको ‘जात्रा’ एउटा उदाहरण हो । त्यसअघि उनी अभिनीत ‘पशुपति प्रसाद’ र ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ पनि फरक स्वादकै फिल्म हुन् । उनको सक्रियता रंगकर्ममा पनि छ।